NgoDisemba, 2018 ezintsha, Microstation-Bentley
Asiyithengisi i-software ngokuthe ngqo, sithengisa isiqhelo sesofthiwe. Abantu abasihlawulanga kwisofthiwe, bayasihlawula oko benzayo
Ukukhula kweBentley kuye kwavela ngokubanzi ngokufumana izinto. Amabini kulo nyaka babeBritani. Synchro; isofthiwe yokucwangcisa, kunye neLegion; Inkqubo yeemephu kunye nabahamba ngezinyawo, bobabini baziwa kwaye bahlonishwa e-United Kingdom. Uhlanganiso ne design kunye nolawulo lweempahla systems Bentley ukwandisa ukusetyenziswa kwabo uze umzise ixabiso kongezelelwa software infrastructure ababhalisele. I-Bentley nayo ivelisa umkhiqizo othile; 2019 ukubona bekusungulwa Iinkonzo iTwin efuna ukwakha imbono "Digital Twin", oko kukuthi, isiphelo imveliso yendalo Building Information nokumodela (BIM), kunye ezivulekileyo umthombo zelayibrari uya kudla iModel.js. Yayiyintoni loo nto? Umthombo ovulekileyo? Ngaba kulindeleke ukuba sikholwe ukuba into esiyiboniyo kwaye ayikwazi ukuyithenga iya kuvelisa imali kubakhi bayo? Chaza ukuba.
Ngaba bekukho inani lokuthengwa kweBentley kulo nyaka, elikuvuyisa kakhulu?
Nditshintshwa kalula ngezinto ezininzi, kodwa ukuhlala phantsi ndikhangele ngasemva koko abantu abakwenzayo nge software yethu ngokwenene. Kukhona amandla anokumangalisayo okudibanisa ezi zizombululo kunye neminikelo yethu yemveliso. Ndiyamkela indlela iS Synchro eyenze ngayo udidi olukhulu kubasebenzisi. Ndiye ndatshitshiswa kukuba abantu bathini ngeLegion. Ndicinga ukuba wonke umntu kufuneka asebenzise iLegion!
E-United Kingdom, ngoku siye neKhomishoni yeGeospatial kuRhulumente. Kuthiwani malunga nedatha ye-geospatial ebangela ukuba oorhulumente baxabise ixabiso layo?
Umxholo wokuya kwidijithali uqala ukubonakala kwakhona. Abantu baqala ukuqonda ukuba ulwazi lukhona, kufuneka luxhatshazwe kwaye lusetyenziswe ngokubanzi ngangokunokwenzeka. Kuphela bubukho bedatha echanekileyo kunye nexesha elifanelekileyo elinemfuno engaphezulu. Lo mkhwa uqinisekile ukuqhubeka. Abantu bazokufuna ukufikelela ngakumbi kulwazi oluninzi ngexesha kunye nezinto ezininzi zefom.
Yintoni le ngcamango eyayisemva kwelayibrari yomthombo evulekile iModel.js?
Sifunde ukuba ulwazi olugcinwe kwiifayile ezinxulumene nokusetyenziswa koyilo lwethu lunokuhambelana nolwazi oluvela kweminye imithombo emininzi yangaphandle; I-GIS, ukwenza imephu, iiasethi kunye neenkqubo zendlela, umzekelo. Kwaye besisazi ukuba kukho umnxeba wokulandela umkhondo wesiganeko esingcono kunye nezinye iintlobo zokunika ingxelo ngoku. Ke kubonakala ngathi kuyindalo ukuthelekisa umbono wendlela kunye noyilo lwale ndlela kunye nezona ndlela zigqithileyo endleleni. Abantu banamava emihla ngemihla ngokusebenzisa ii -apps zolu hlobo lolwazi, kwaye abanakuqonda ukuba kutheni kufanele kube nzima. Kuya kufuneka sisebenze ekwenzeni olo nxibelelwano lube lula njengoko sinakho.
Kukho intetho eninzi malunga "nedatha ebumnyama", yintoni na loo nto?
Kwihlabathi lobunjineli, isicelo ngasinye senzelwe ukuxazulula ingxaki ethile, kwaye ezininzi zazo zadlulelwa kwiminyaka edlulileyo. Bagcina idatha yabo ngendlela efikeleleka lula ngokusetyenziswa kwesicelo. Uninzi lwexesha - kwaye ndizithetha ngenxa yezicelo zethu - ingcamango ifana nokuqonda ukuba ulwazi lusesicelo, kungekhona kwifayile. Ifayili yinkqutyana yeetes kwaye xa uzama ukuyiqonda ngaphandle kwesicelo, ayikho into. Ubumnyama kukuba ezinye izicelo azikwazi ukutolika kwaye zibonise kakuhle.
Thina sinetyala lokudala le meko njenganoma ubani. Kodwa imeko yehlabathi ngoku kukuba sinesibalo esichukumisayo sezicelo ezifunekayo ukuphuhlisa yonke into ebumbeneyo yeefayile ezizimeleyo. Akukho mntu unokuwufezekisa. Sineenkcukacha kwaye zibalulekile, kodwa siyazichitha.
Umthombo ovulekileyo unyathelo elikhulu phambili eBentley, kutheni ngoku?
Ndiye ndakuxhasa ixesha elide, kodwa awukwazi nje ukuvula umzimba wekhowudi osemgodini wokubhala. Ukuba sasivelise umthombo ovulekile kwizicelo zethu kwiminyaka embalwa edlulileyo, inkqubo yokwakha yayiza kuba nzima. Ukuchaza nje indlela isebenza ngayo ngaphantsi kwamandla omntu ongapheliyo-kwaye kuphela izicelo ezivela kwimithombo evulelekileyo eziyimpumelelo zizo ezo zinto zingabonakaliyo. Mhlawumbi lo mboni ongaphenduliyo akatshintshi nto nantoni na, kodwa yiyo isizathu sokuvula umthombo - kuba abantu bangayisebenzisa kwizinto ezingenzelwe.
Asilindelanga ukuba ngenxa yokuba ikhona, ukuba abantu bayisebenzise. Kuya kufuneka sisebenze kanzima ukubonisa ukuba ukusebenzisa i-iModel.js kukufanele ukutyalomali kunye nexesha.
Ngaba uhlangane naluphi na ukunganyaniseki ngaphakathi kweBentley kumthombo ovulekile?
Okuhle! Kwakukho ulawulo olusisiseko kwiBentley Systems eyathi yinto engcolileyo. Singabantu inkampani yesofthiwe. Sithengisa isoftware Abantu babekholelwa ukuba ndinika izinto ababezama ukuzithengisa. Kwaye ndaqhubeka ndizama ukucacisa ukuba asiyi kuthengisi i-software, sithengisa isiphumo sesofthiwe. Abantu abasihlawulanga kwisofthiwe, bayasihlawula oko benzayo.
Uthi ininzi yesofthiwe yesistim evulekile ayinakukhatyathwa, yiyiphi imingeni ojamelana nayo ekufumaneni inzala?
Yenza abantu bafumane ukuba okuphambili akukho.1. Kodwa oko kungokuqala komdlalo. Emva koko baya kufakazela. Baya kuba nemibuzo. Baya kuba neengxaki. Baya kufuna ukwenza utshintsho. Baya kuphakamisa iingcamango ezingezinye. Ukukwazi ukuphendula kuwo onke amanqanaba yintoni eyenza umsebenzi weprojekthi evulekile kakuhle.
Isofthiwe yomthombo ovukileyo kufuneka ifumane ubunzima obunzima phambi kokuba abantu bacinge ukuba bayingxenye yenkinga enkulu. Akukho mntu ufuna ukusebenza kwinto ukuba bacinga ukuba uyafa. Ukuba ngumthombo ovulekileyo awuthetha ukuba abantu baya kuhamba kunye nathi babe ngabasebenzisi be-viral yemveliso yethu. Siza kufuneka senze oko kwenzeka.
Ndihlala ndihlaziyekile ngomlinganiselo wenzame iGoogle nabanye abayifake kwiiprojekthi zabo. Benza into ethile evulekileyo, kwaye babeka iqela lokuthengisa ukuze liyithengise. Ukuba ucela into, umntu uphendula. Naliphi na ingxaki onayo, kukho umntu onokukunceda, kungekho rhoqo kwimvelaphi yangempela kwiifom kunye noluntu oluku-intanethi. Zinezinto eziphilayo ezinemizekelo. Ithetha ukuzondla ngokwayo.
Cinga ukuba ubhala inkqubo. Ukuba awuyi kushicilela ikhowudi yakho yomthombo, ingaba yi-opaque kwaye iyinkimbinkimbi. Ukuba usebenza, sebenze. Kodwa ukuba uthetha ukuba abasebenzisi banokubeka iindawo zabo ngaphezulu kwayo, ukuba uya kuphakamisa ukuba yinto yokungena kwabanye abantu, kufuneka uqinisekise ukuba lifanelekileyo ixesha labo. Akuyena inyathelo elibonakalayo eliphambili. Kwiminyaka elishumi edlulileyo ndibe ndithethile; Akukho ndlela, kunzima kakhulu. Kodwa ukudibanisa ne-iTwin imodeli yokubhaliselwa kunye nenyaniso yokuba i-ecosystem yendalo yomhlaba ovulekileyo isetyenzisiwe, kuthetha ukuba sinethemba lokuzixhasa.
Kwiminyaka yakutshanje sibone ukubambisana ngakumbi phakathi kweenkampani ezinkulu, iBentley isebenza ne-Microsoft, i-Siemens kunye ne-Topcon phakathi kwabanye, kutheni na?
Kuze kube yiminyaka embalwa edlulileyo asizange sisebenzise nantoni na into. Kwexesha elithile, sathi sasingathathi hlangothi kwaye sasixhasa wonke umntu ngokulinganayo. Kodwa i-Topcon kunye ne-Siemens kunye nabanye beza, kwaye kwakubonakala njengomzekelo onokusebenza; sonke siza kufumana inzuzo. Ngamanye amaxesha sineengxoxo malunga nokuba imida imele ibe yintoni phakathi kwento esenzayo / yenza kunye nokuba kufuneka bahlawule kangakanani / kufuneka bahlawulwe kangakanani. Kodwa ndicinga ukuba sonke siphuculwe kunokuba sinazo izivumelwano zentsebenziswano.
Kwimeko yeTropcon, sisebenza kunye xa ihambelana kakuhle nezinto eziphambili. Sisoloko sizama ukubenza baxelelwe ukuba siya kuphi, ukuze singabikho. Awukwazi ukwenza oko wonke umntu. Ulwalamano olukhethekileyo alukhethi ngakumbi ukuba unalo hlobo lolwalamano nomntu wonke. Le ngcamango yesivumelwano sentsebenziswano, apho sihlanganisene khona ngoku, siyimodeli esebenzayo kakuhle. Andikwazanga ukuqikelela. Enyanisweni, andingakholelwa kulo mbono, kodwa ndivuyiswa kukuba banokubonisa ukuba ndiphosakele.
Njengomsunguli weBentley, yiyiphi inqabisekileyo?
Senze ukuthengwa kwe-105, ezinye zazo zininzi okanye zide ixesha elide kunezinye. Kodwa into esiyifumanayo ngamaxesha amaninzi ngabantu abalungileyo. Ipesenteji enkulu yabalingane bethu bevela kule mivuzo. Ukuba uyinkampani encinci kwaye uhambelanisa inkampani enkulu, ngoko kukho iindlela ezimbini onokuzilandela: landela indlela ophumayo kwaye ubuyele kwinkampani encinane, okanye ubone ithuba. Siyakwazi ukukholisa abanye abantu abahlakaniphile ukuba bahlale.
Simanyene iinkampani ezili-105 ezidibene kule minyaka idlulileyo. Inokuba ndiyiqalisile, kodwa andinakuthatha matyala amaninzi ngento esiyiyo. Xa ndihleli ngasemva kubaphulaphuli ndibukele idemo yeSynchro, ngoku ebizwa ngokuba yi "Bentley Synchro," ndicinga kum, mfo, abo bantu banengqondo. Ndihlala kubuqaqawuli bakhe obubonakalisiweyo. Ndaziva ngendlela efanayo malunga nokufumana i-Acute3D kwiminyaka embalwa edlulileyo. Abo bantu baqaqambile. Benze esi sixhobo simangalisayo. Siyayifumana. Ndiyamjonga, kwaye nditsho kum, damn it, igama lam likho. Kulunge kakhulu oko.
Uvakalelwa njani ngobukhulu beBentley ngoku?
Xa saqalisa, ndandingazama ukuhlala kwishishini ixesha elaneleyo ukuhlawula iindleko. Ngesinye ixesha, ndayazi wonke umntu owayesebenzela iBentley Systems. Ndazi ukuba benza ntoni. Wayeyazi abantwana bakhe. Kuhluke ngoku. Siye sanda kwiindawo zeengxaki ezingezo sijamelene nazo ekuqaleni. Siye sanda kwiimarike ezingenakuba yi-market yethu evamile. Ukufikeleleka kwethu kukubanzi kunokuba bekuya kuba sele sikhule ngokusemzimbeni. Yayiyiphi imigaqo yokuqalisa iBentley? Ndasebenza kuDuPont, owayengumsebenzisi we-Integraph. Umntakwabo uBarry wayeqalile inkampani yakhe yesoftware, kwaye ndashiya iDuPont ukuba ndimsebenzele. Okwangoku, iDuPont yandibuza ukuba ndiphucule isofthiwe engayibhalile xa ndisebenza apho. Ndandixelela ukuba ndiza kuphucula ukuba bandinika ilungelo lokuthengisa. Kwaye kwakungokokuqala. Ndaqalisa iBentley Systems kwaye ndaqalisa ukuthengisa isofthiwe ye-CAD.
Saxoxa noGreg Bentley e-2016 waza wabuza ukuba kwakunjani ukusebenzisana nabazalwana bakhe, kubonakala njani kuwe?
Ndicebisa ukuba ungenzi! Kodwa kuye kwavela kakuhle. Asizange sibe necebo elipheleleyo. Xa saqala inkampani, kwakukho ezintlanu esisebenza apho ngelo xesha kwaye umama wayencatshiswa. Akakwazanga ukukholelwa ukuba isofthiwe yayinyani. Awukwazi ukwenza uluvo lokuba abantu baya kuhlawula into abangayiboniyo. Wayekhathazekile ngokwenene ukuba bonke abantwana bakhe abahlanu babengayi kuba sebenzi kwaye babuyele ekhaya.
Yintoni okulindele kakhulu kwiBentley kwi-2019?
Ingcamango yeejithali zejithali. Omnye uza kuyenza. Nabani na okhulayo ngokwenene uya kuba nethuba elikhulu lokuthengisa ngaphandle kwezinto ezikhoyo ngoku. Eli thuba, eli phulo kwi-shishini apho kukho utshintsho olukhulu phakathi kwehlabathi elinqanyuliweyo langoku kwaye idijithali yehlabathi liyimarike ekufuneka siyifumene ngokukhawuleza. I-2019 ingaba ngumnyaka owodwa kuthi.
Ndilapho kwiintsuku zokuqala zekhompyuter. Ikhompyuter yayintsha kraca, kwaye wonke umntu wayecinga ukuba zeziphi izinto ezinokwenzeka. Ndicinga ukuba sikumnyango wokuqala kwakhona sinamawele edijithali. Ayisiyongcinga intsha, ulwakhiwo kunye neziseko zophuhliso zezona zisalayo kule. Ukuba ndijonga indlela eliqhuba ngayo ishishini ngo-2018, ayikhangeleki yahlukile kunaleyo sasiyiqala ngo-1984. Ewe, sinamaphepha edijithali. Ewe, sinemodeli ye3D. Kodwa iikhontrakthi zithetha into enye, kwaye abantu ngokubanzi bakha ngendlela efanayo ngokulandelelana njengangaphambili. Izinto ezinjengeSynchro ziguquka, kodwa azisetyenziswa kakhulu. Kweli nqanaba elilandelayo, izinto ezininzi ziya kwahluka.
Nasiphi na isiphumo esivela kumathuba adalwe kwi-twin yehlabathi, iya kuba yindawo yomhlaba ovulekileyo. Ndiqinisekile ngalo. Ndiya kufudelwa ukuba ndikhuphisane naye nantoni na, ngoko sifuna ukukhokela. Kulula, emva kweminyaka eyi-35 ngoku, ukusho, ndiphelile. Kodwa ndivakalelwa kukuba sisekuqaleni komncintiswano oya kuphendukela kwinqanaba elilandelayo legolide.
UKeith Bentley, uMsunguli kunye no-CTO, uBentley Systems, ethetha noDarrell Smart no-Abigail Tomkins.
I-CES uDisemba 2018 / Januwari 2019
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukwenyuka okanye ukunganyani? Yintoni engcono ukubonisa iphrojekthi?
Post Next Hlola imifanekiso ye-satellite kunye nokuhlalutya ukuhlalutya usebenzisa i-LandviewerOkulandelayo »